AKHRISO:- Muwaadin Soomaaliyeed oo ka mid noqday golaha wasiirada Tanzania. | Allgalgaduud.Com
Home Dhacdooyinka Todobaadka AKHRISO:- Muwaadin Soomaaliyeed oo ka mid noqday golaha wasiirada Tanzania.
AKHRISO:- Muwaadin Soomaaliyeed oo ka mid noqday golaha wasiirada Tanzania.
Madaxweynaha Tanzania ayaa isku shaandheyn ku sameeyay golihiisa wasiirada, Wasiirada cusub ee uu magacaabay Madaxweynaha Tanzania ayaa waxaa ka mid ah Xuseen Maxamed Baashe oo loo magacaabay Wasiirka Beeraha, isagoo laga bedelay Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Beeraha.
Wasiirka Beeraha Xuseen Maxamed Baashe oo muwaadin Soomaali ah, wuxuu 26 Ogosto 1975 ku dhashay gobolka Nzega, waana siyaasi iyo ganacsade caan ah oo heysta dhalashada dalka Tanzania.